Jwxo-shiil, oo Labo Habeen Yaala Isbitaal – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo Labo Habeen Yaala Isbitaal
Jun 23, 2011 Jwxo-shiil oo Labo Habeen Yaala Isbitaal
War aanu ka helay ilo ku dhaw qoyska ree Jwxo-shiil, oo codsaday in aanaan magac qaadin, ayaa waxay noo soo gubiyeen war sheegaya in uu Isbitaal yaal Maxamed Cumar Cisman [Jwxo-shiil].
Warku waxaa uu sheegay in uu dhiigu kacay [high blood presure], ka dib kolkii uu maqlay geerida wiilka uu Abtiga u ahaa ee la odhan jiray Cabdi Cabdulahi, oo shaly aroortii ay Booliska Kenya ka heleen maydkiisa xaafad ka mid aha xaafadaha Nariobi.
Jwxo-shiil, ayaa isla shalayba la dhigay Isbitaalka West Midlesex University Hospital, oo ku yaal magaalada London.
Wax warbixin ah kama hayno heerka uu gaadhsiisan yahay dhiig karka ku kacay Jwxo-shiil iyo waliba nooca dhiig karka. Jwxo-shiil, ayaa hore u qabay xanuunada dhiig karka iyo Sonkorta, waxaa kale oo u dheer labada xanuun subaga gala xididada dhiiga waxyeela wadnaha loona yaqaan [cholesterol] oo u saraya.
Jwxo-shiil, ayaa xanuunada uu qabo ka sokow ah nin da,a oo had iyo jeer ku dhex jira arimo fawda ah oo mar walba ka nixiya. Jwxo-shiil, ayaa ahaa nin ka nabad galay balwadaha caafimaadkiisii horena wanaagsanaa, marka laga reebo labadan xanuun oo ay da,adu keento.
Waxaa adag in la helo warka dhabta ah ee caafimaadka Jwxo-shiil, maadaama oo ayna waryeyaasha rasaasa.com u jooga London ku booqan karin qolka uu kaga jiro Isbitaalka, ayna adagtahay in qoyska war laga helo.
Marxuunka dhintay ee Cabdi Cabdulahi, ayaa ahaa ninka kaliya ee uu Jwxo-shiil, isku haleeyo una gudbiyo wararka ku saabsan dilalka ka dhaca gabalka Ogaden, isaguna waxaa uu amar siin jiray xunaha u jooga gudaha.
Laba todobaad ka hor ayey ahyd kolkii ay kooxda Jwxo-shiil, xasuuq dilal ah ka gaysteen Tuulada Ceel-xaar oo ay ku dileen 17 ruux oo shacab ah, 21 dhaawac ahna wali jiifaan Isbitaalka Qabridahare.
wixii war ka soo kordha kala soco rasaasa.com
Xubno ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil, oo Booliska Kenya Galabta Qabtay
“Maxam Cumar Dacay Waa Adeerkay Eedayse” Sidaas waxaa yidhi…